नकारात्मक बाह्यताहरू: तिनीहरू के हुन्, विशेषताहरू र परिणामहरू | हरियो नवीकरणीय ऊर्जा
नकारात्मक बाह्यताले समाजको लागि सबै प्रकारका हानिकारक प्रभावहरूलाई जनाउँछ, उत्पादन वा उपभोग गतिविधिहरूद्वारा उत्पन्न हुन्छ, जुन तिनीहरूको लागतमा उपस्थित हुँदैन। वातावरण, मानव र जैविक विविधताका लागि नकारात्मक बाह्यताहरू तिनीहरू विश्लेषण गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छन्।
यस कारणले गर्दा, हामी तपाईंलाई यो लेख समर्पित गर्न जाँदैछौं कि नकारात्मक बाह्यताहरू के हुन्, तिनीहरूका विशेषताहरू र वातावरणको लागि मुख्य परिणामहरू।
1 नकारात्मक बाह्यता के हो
1.1 सकारात्मक बाह्यता
3 नकारात्मक बाह्य उदाहरणहरू
नकारात्मक बाह्यता के हो
हामी बाह्यताहरूलाई व्यक्ति वा कम्पनीको गतिविधिले गर्दा हुने माध्यमिक प्रभावहरूको रूपमा परिभाषित गर्न सक्छौं जुन गतिविधिको सबै सामाजिक वा वातावरणीय परिणामहरूको लागि जिम्मेवार हुँदैन।
सामान्य सर्तहरूमा, त्यहाँ दुई प्रकारका बाह्यताहरू छन्, सकारात्मक र नकारात्मक, जसलाई हामी तल विस्तार गर्नेछौं। यसलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि: सकारात्मक बाह्यताको स्पष्ट उदाहरण उद्योगले कार उत्पादन गर्दा वातावरणमा हुने प्रदूषण हो। यो कम्पनी सामग्रीको अधिग्रहण, सवारी साधनमा रूपान्तरण र बिक्रीको लागि जिम्मेवार छ, तर यी गतिविधिहरूको नकारात्मक बाह्यतालाई ध्यानमा राख्दै, यसले वातावरणको लागि गम्भीर परिणामहरूको साथ उत्पादन प्रक्रियामा अत्यधिक प्रदूषित मेसिनरी प्रयोग गरेको हुन सक्छ।
सकारात्मक बाह्यताहरू समाजका सदस्यहरूको गतिविधिका सबै सकारात्मक प्रभावहरू हुन्, ती गतिविधिहरूको लागत वा फाइदाहरूमा निहित होइन। सकारात्मक बाह्यता को परिभाषा कुनै विशेष क्षेत्र वा विज्ञानमा सीमित छैन, कुनै पनि व्यक्ति वा कम्पनीको कार्यले हाम्रो समाजमा पार्न सक्ने ठूला र साना सबै सकारात्मक प्रभावहरू समावेश गर्दछ।
हामी सकारात्मक परिणामहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौं जुन उत्पादन लागत वा खरीद मूल्यहरूमा समावेश छैन, तर जसले समग्र समाजको लागि धेरै लाभदायक परिणामहरू हुन सक्छ। कतिपय रोगको उपचार खोज्न अस्पताल र प्रयोगशालाको लगानी यसको उदाहरण हो। सुरुमा, कसैले यो प्रतिबद्धता सोच्न सक्छ अनुसन्धानकर्ताहरूले छिट्टै उपचार पाउन सकेनन् भने R&D ले धेरै खर्च गर्न सक्छ.
वास्तविकताले हामीलाई एकदम उल्टो बताउँछ, कि यस प्रकारको गतिविधि मानिसहरूको कल्याण र स्वास्थ्यको लागि धेरै आवश्यक छ, किनकि ढिलो वा पछि एक औषधि पत्ता लगाइनेछ जसले सम्बन्धित रोगको प्रभावलाई कम गर्छ। प्राप्त हुन समय लाग्ने, ठूलो आर्थिक लगानीमा थपिएको यो औषधिले हजारौंको ज्यान जोगाएर समाजमा निकै सकारात्मक बाहय प्रभाव पार्ने छ, तर यति लामो समयदेखि भइरहेको अनुसन्धानमा यो कुरा झल्किएको छैन ।
सकारात्मक बाह्यताको विपरीत, नकारात्मक बाह्यता भनेको कुनै पनि गतिविधिको परिणाम हो जसले समाजलाई हानि पुर्‍याउँछ, यसको लागतमा निहित छैन। यद्यपि हामी आर्थिक क्षेत्रका अवधारणाहरूसँग व्यवहार गरिरहेका छौं, यी अवधारणाहरू दैनिक जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा एक्स्ट्रापोलेट गर्न सकिन्छ.
नकारात्मक बाह्यता को एक राम्रो उदाहरण पर्यावरण को प्रदूषण, विशेष गरी उद्योग, ठूला निगमहरु द्वारा। कोइलाको निकासी र प्रशोधनमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने एउटा ठूलो खानी कम्पनीको मामला कल्पना गर्नुहोस्। गतिविधि सञ्चालनको लागत मापन गर्दा, तिनीहरूले वातावरणमा हुने प्रदूषणको उच्च स्तरलाई ध्यानमा राख्दैनन्। यो एक नकारात्मक बाह्यता मानिन्छ र यो कम्पनीको उत्पादन प्रक्रियाको परिणाम हो। र बिक्री मूल्य वा कोइला उत्पादनको लागतमा प्रतिबिम्बित हुँदैन।
यदि हामीले रोकेर सोच्यौं भने, प्रायः सबै कार्यहरू समाजको लागि नकारात्मक बाह्य छन्। उदाहरणका लागि, सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्यका लागि हानिकारक साइड इफेक्ट गर्छ, तर पूर्वाधारको ह्रास जस्ता नकारात्मक बाह्यताहरू सिर्जना गर्दछ (यदि कुनै व्यक्तिले कोठामा धुम्रपान गर्दछ भने, धुवाँले पर्खालहरू रङ्गिन र क्षति पुर्‍याउन सक्छ), र यसले कसैको स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ (दमाका बिरामीहरू चुरोटको धुवाँ सास फेर्दै)।
नवीकरणीय ऊर्जा र दिगो उत्पादन प्रक्रियाहरूको प्रयोगलाई बढावा दिन सबैभन्दा बढी प्रदूषण गर्ने कम्पनीहरूलाई कर लगाउनुहोस्।
विशेष गरी वैज्ञानिक र चिकित्सा क्षेत्रमा अनुसन्धान र विकासको लागि कोष प्रदान गर्नुहोस्।
बाह्य, चाहे सकारात्मक वा नकारात्मक, तिनीहरू समाजको आर्थिक क्षेत्रमा मात्र होइन। धुम्रपान वा फुटपाथमा प्लास्टिक फाल्ने जस्ता कुनै पनि प्रकारको व्यवहारले समाजमा अल्पकालीन/दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ, जुन व्यवहारमा निर्भर गर्दै नकारात्मक वा सकारात्मक हुन सक्छ।
नकारात्मक बाह्य उदाहरणहरू
यसको बारेमा सोचौं, हाम्रा सबै कार्यहरू, जुन हाम्रो लागि नगण्य किन नहोस्, हाम्रो समाज बनाउने बाँकी मानिसहरूमा प्रभाव पार्छ।
त्यो कार्य गर्दा नकारात्मक बाह्यताहरू उत्पन्न हुन्छन् हामीले कुनै गतिविधिमा कम्पनी, व्यक्ति वा घरपरिवारलाई तेस्रो पक्षहरूका लागि हानिकारक माध्यमिक प्रभावहरूको रूपमा लिन्छौं। यी प्रभावहरू कुल लागतमा समावेश छैनन्। जोडको नकारात्मक प्रभाव उत्पादनमा वा उपभोगको समयमा सार्वजनिक सेवाहरूको मूल्यमा अवस्थित छैन।
नकारात्मक बाह्यताहरू, जस्तै सकारात्मक बाह्यताहरू, तिनीहरू एक आर्थिक अवधारणा हो। तर यो ध्यान दिनुपर्छ कि यी समान रूपमा आर्थिक संसार बाहिर लागू गर्न सकिन्छ। तसर्थ, आर्थिक गतिविधिहरूले मात्रै बाह्यताहरू उत्पन्न गर्दैन, तर ती गतिविधिहरूलाई पनि गैर-आर्थिक रूपमा चिनिन्छ।
बाह्यताहरू कथित र प्रत्यक्ष प्रभावहरू हुन् जुन उत्पादन, प्रयोग वा उपभोगको लागि भुक्तान गरिएको मूल्यमा उपस्थित हुँदैनन्।
तल दिइएको नकारात्मक बाह्य उदाहरणहरूले हामीलाई मद्दत गर्न सक्छ त्यस्ता बाह्यताहरूको हाम्रो बुझाइलाई गहिरो बनाउन। हामीलाई थाहा छ कि नकारात्मक बाह्य स्रोतहरू अनन्त हुन सक्छन्। यद्यपि, उदाहरणको रूपमा, हामी निम्नलाई औंल्याउन सक्छौं।
रेडियोधर्मी फोहोर आदि
इन्जिनको आवाज धेरै ठूलो छ
यो अनुमान गर्न सकिन्छ कि एक नकारात्मक बाह्यता लागत संग कार्य र प्रभाव को एक विशाल श्रृंखला हो।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ तपाईले नकारात्मक बाह्यताहरू र तिनीहरूका विशेषताहरू बारे थप जान्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: हरियो नवीकरणीय » वातावरण » नकारात्मक बाह्यताहरू
गतिज र सम्भावित ऊर्जा